Ukusukela oko yasekwa ngo-1987, iQela le-YUFA lakha isiseko semveliso enkulu kunye nommandla opheleleyo ongaphezulu kwe-193,000 yeemitha zesikwere, nesiphumo sonyaka ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-25,000. Ukubambelela kumoya wobukrelekrele iminyaka engaphezu kwama-30, sizibophelele kuphando kunye nophuhliso lweemveliso zoluhlu oluphezulu lwealumni. Ezona mveliso ziphambili zifakwe i-corundum emhlophe, i-aluminium-magnesium spinel edityanisiweyo, i-dense corundum eshinyeneyo, i-crystal corundum enye, kunye ne-calcined α-alumina.
Ngokusebenzisa amajelo entengiso akwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi, iimveliso zeQela le-YUFA zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-40 nakwimimandla kubandakanya iUnited States, iJamani, iSouth Korea, iJapan, iTurkey, iPakistan neIndiya njl.
Amava eminyaka engama-30 +
Iingcali zezinto ezikufutshane nawe, ukuqinisekiswa komgangatho, eziya kusombulula iingxaki ze-abrasives, izinto ezitsalayo kunye neminye imiba efanelekileyo kuwe.
IZISEKO ZEMVELISO EZI-3
Iziphumo ezinkulu, iimveliso zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Ngamandla emveliso yonyaka yeetoni ezingama-250,000.
INKONZO YOKWENZA NGOKUQHELEKILEYO
8 uthotho, iimveliso ezingaphezu kwama-300, inkxaso ulwenziwo iinkcukacha ezahlukeneyo kunye neemodeli ukuhlangabezana neemfuno zakho.
INKCUKACHA ZOBUCHULE R & D
Amaziko ama-R & D ama-5, ubudlelwane bokusebenzisana kunye neeyunithi zophando lwezenzululwazi, ezinje ngeShanghai Institute of Ceramics, iTshayina Academy yeSayensi, njl njl.
I-17 ezenzekelayo yolawulo lwedijithali oluthambisayo, iivilini ezi-2 ezijikelezayo, itonnoli e-1 yetonil kunye ne-1 yokutshiza ipleyiti yeziko, 2 uxinzelelo lokuxabisa iinqaba, i-2 desulfurization kunye nezixhobo zokuchasa.
Iipesenti ezili-100 zokupasa kwemveliso, iipesenti ezili-100 zokupasa kwimveliso. Ungqongqo ukulawula umgangatho ukusuka izinto zokwenza imveliso ogqityiweyo. Ayisiyiyo yokuqinisekisa kuphela umgangatho, kodwa ikwaqinisekisa uzinzo lomgangatho.
Iqela leYUFA linombulelo omkhulu kubathengi abatsha nabadala ngokuza kumzi-mveliso ukunxibelelana nokufunda. Abathengi bazana neemveliso ezivela kwi-YUFA kwaye baziva isitayile kunye nomoya we-YUFA. I-YUFA ivelisa iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu ukubuyisela inkxaso kubathengi. Kwaye i-YUFA iya kuba liqabane elithembekileyo kubathengi.
Qho ngonyaka i-YUFA iya kuthatha inxaxheba kwimiboniso eyahlukeneyo enxulumene nomzi mveliso wasekhaya nakwamanye amazwe, ifunde kwaye itshintshise ulwazi ngemveliso eyahlukeneyo, iphucule umgangatho kunye netekhnoloji yeemveliso zethu, kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni nabathengi abaninzi abavela kwihlabathi liphela, kwaye sinethemba ukubonelela ngemveliso esemgangathweni esemgangathweni kunye neenkonzo ezilungileyo kubathengi.